साम्राज्ञीको प्रेममा को ? (तिमी सँग प्रोमो) « Ramailo छ
साम्राज्ञीको प्रेममा को ? (तिमी सँग प्रोमो)
साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह, आकाश श्रेष्ठ र नाजिर हुसेन स्टारर फिल्म ‘तिमी सँग’ को प्रोमो रिलिज गरिएको छ । चैत २३ गतेलाई प्रदर्शन मिति पक्का गर्दै शिशिर राणाको निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । प्रोमो हेर्नुस् :
तिमी सँग को प्रोमो ले तीन पात्रको यात्रा र त्यसबिचमा उत्पन्न हुने विविध घटनालाई प्रस्तुत गर्दछ । निर्देशक राणाले प्रोमो कर्मसियल बनाएका छन् । सुन्दर दृश्य, रमाईला संवाद, गीत र फाइट प्रोमोमा देख्न सकिन्छ । प्रोमोमा साम्राज्ञीले आकाश र नाजिरले साम्राज्ञीलाई फलो गरेका छन् ।
साम्राज्ञी, आकाश र नाजिरसँगै प्रोमोमा तेश्रो लिंगी कलाकार अनुप शर्माको पनि केही झलकहरु छन् । सुशिल क्षेत्रीको सिनेम्याटोग्राफी रहेको फिल्ममा रोशन भट्टराईको द्धन्द्ध निर्देशन छ । ‘ए मेरो हजुर २’ पछि साम्राज्ञीको ‘तिमी सँग’ प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । प्रेसमिटको भिडियो हेर्नुस् :